Editor's Notes » အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ဧပြီလ ၂၀၁၆	34
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: တကယ်
ဦးကြောင်ကြီး says: မာမူခိုင်
မြစပဲရိုး says: ပြန်ဝန် က ဦးဖေမြင့် သတင်းပြေး နေတယ် ဗျို့။ ဟုတ်မဟုတ် ကြည့်စို့။ :-)))
kai says: ဟုတ်မှာပေါ့…
ခင်ဇော် says: အခွီးခွီးး
kai says: ရှိသမျှ.. သားမြေးမြစ်တွေအကုန်.. နိုင်ငံခြားပို့ကျောင်းထား.. ကုမ္ပဏီထောင်.. စီးပွားရေးလုပ်ခိုင်းထားသမျှ… ဒုက္ခရောက်နေပုံများလေ….။
၅၉ ကိုအစိမ်းလိုက်ဝါးစားချင်နေကြတာ.. သူတို့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1294
uncle gyi says: NLD အစိုးရဖွဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း
မြစပဲရိုး says: သတင်း ဌာန တွေထဲမှာ “အများပြည်သူ နဲ့ ဆိုင်တဲ့ သတင်းဌာန” တစ်ခု လဲ ရှိသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ အစိုးရ ကပါ ပါဝင်နိုင်တဲ့ အများပိုင် ကုမ္ပဏီ လိုမျိုးပါ။ ဒါမှသာ အများပြည်သူ ကို ကိုယ်စားပြုပေးမဲ့ ပညာပေး ပရိုဂရမ် တွေ ကိုလဲ တင်ဆက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်း ဆိုရင်လဲ အစိုးရ မှားလဲ ပြောမယ်၊ အပြင်လူ မှားလဲ ပြောမယ် ဆိုတဲ့ ပြည်သူ့ မျက်နှာ အတွက် ဘဲ အလုပ်လုပ်မဲ့ အဖွဲ့အစည်းပေါ့။ အခု အစိုးရ အသစ် က ဖွဲ့ထားတဲ့ ဝန်ကြီးဌာန ကို နောက်ပိုင်း တစ်ချိန်ချိန် မှာ အများပိုင် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ဖို့ ပြည်သူ တွေ ဆီ ကို အစုရှယ်ယာ တွေ ထုတ်ရောင်း ပေးခြင်းသဘောမျိုး ပါ။ အားလုံး ကို ပုဂ္ဂလိက ပေးလိုက်ရင်တော့ ကိုယ့် စပွန်ဆာ နဲ့ ကိုယ် သန်ရာ သန်ရာ အဖိ အဖာ မီဒီယာ မျိုး တွေ ဘဲ ဖြစ်ကုန်ပါမယ်။ ပုဂ္ဂလိက ဆိုတာ ကိုယ့် အကျိုးအမြတ် မပါဘဲ အများပြည်သူ လူထု အတွက် တကယ်ဘဲ စိတ်ရင်း နဲ့ အလုပ်လုပ် ပါ့မလား ဆိုတာပါဘဲ။
လုံမလေးမွန်မွန် says: တစ်နေ့တစ်နေ့ သဘောကျ ပီတိတွေဖြစ် ဝမ်းသာလုံးဆို့နေရတာနဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ရန်လုပ်ဖို့တောင် သတိမရ . . .
မြစပဲရိုး says: အရပ်ဖက် ဝန်ကြီး ဌာန ၁၈ ခုမှာ ဝန်ကြီး ၁၅ ယောက် ဘဲ ရှိတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဌာန ၄ ခု တွဲ ကိုင်မှာ သေချာလောက်ပြီ။
သူ့လောက် ဘယ်သူ မှ မှ သမ္ဘာ မကောင်းတာ ကို။ ရွှေ့ကွက်တွေ က တော့ တကယ်ဘဲ ပညာပါလှတယ်။ ကြိုပြောထားမယ်။ “အာဏာရှင်” လို့ သုံးချင်ရင် အဲဒီ စကားလုံး ရဲ့ အဓိပ္ဓါယ် နဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာ တွေ ကို စာကျေအောင် ဖတ်ပြီး မှ လာပြောကြ။
မြစပဲရိုး says: ၁. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် – နိုင်ငံခြားရေး ၊သမ္မတရုံး ၊ ပညာရေး၊ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်
kai says: ဒေါ်စုတော့ အသက်တိုပြီ…။
မြစပဲရိုး says: ဟား ဟား။ ကြည့် သူကြီး။ တစ်ချို့ ကိုယ်မလုပ်နိုင်တိုင်း သူများ ကို အထင်သေးလွန်းကြတာ များတယ်။ (ရှင့် ကို ပြောတာ မဟုတ်ပါ)။ မိန်းမ တွေ အပြင်မှာလဲ အလုပ်လုပ်၊ ဘွဲ့ကိုလဲ အပိုရအောင်ယူ၊ ကလေးလဲမွေး ထိန်း၊ အိမ်အလုပ်လဲ လဲ ကျေအောင် လုပ်ရသေး။
မြစပဲရိုး says: မိခင် အုပ်စိုးသော ခေတ် မှာ “အဖ တိုင်းပြည်ကြီး” ပြောင်းလဲ တိုးတက် စေရမည်။ :-)))
kai says: မြန်မာပြည်မယ်.. ယောက်ျားတွေမိန်းမ၁ယောက်ထက် ပိုယူခွင့်.. တရားဝင်မှုကို… ပိတ်နိုင်လိုက်တာတော့.. အောင်မြင်မှုတခုပေါ့…
ဒါမှမဟုတ်.. ကျိုက်ထီးရိုးကျောက်တုံးတောင် ထိကိုင်လို့မရသူတွေ..ဘ၀…။ အမျိုးသမီးမတက်ရ/မ၀င်ရ.. ဆိုင်းဘုတ်တွေနောက်ကဘ၀.. သနားတယ်ပြောရမှာပဲ..။ Was this answer helpful?LikeDislike 3714
လုံမလေးမွန်မွန် says: မိန်းမတွေလည်း ယောက်ျားတစ်ယောက်ထက်ပိုယူရင် အပြစ်မပြောကြေးလေ… လုပ်ကြမား
naywoon ni says: မြစ်​ဆုံနဲ့ ​ဒေါ်စု ​တွေ့ဘီ​ပေါ့ကွာ တည့်​တည့်​ကြီး ပွဲက​တော့ကြည့်​​ကောင်​ဘီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဒါတင်ဘဲလား အဘနီရယ်။ လက်ပံတောင်းကြေးနီ စီမံကိန်း ၊ ထောင်ထဲက ကျောင်းသားတွေ ကျန်သေး။ ကျွန်မတော့ ဦးညွတ်ပြီး ရင်း ဦးညွတ်ရင်းဘဲ။
ဦးဦးပါလေရာ says: ကိုယ်ချင်းမစာဘူးပဲ ဆိုချင်ဆိုတော့…
Thint Aye Yeik says: .မကြာခင် ငါးနှစ်အတွင်းမှာ စာအုပ်စိမ်းကြီးတစ်အုပ်လုံးမဟုတ်တောင်
ムラカミ says: ???
မြစပဲရိုး says: တိုင်းပြည် အပေါ်စေတနာရှိပြီး အမှန်တကယ်တတ်သိ တဲ့ ပညာရှင် တွေ အတွက် ကတော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဟာ အလွယ်လေးပါဘဲ။ ကိုယ့် ရဲ့ ပညာဉာဏ် နဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်း နဲတိုင်း အပြောင်းအလဲ မှာ မလွယ်ဘူး ချည်း ပြောနေတဲ့ လေဆရာကြီးများ ဖတ်ကြဖို့ သင့်တယ်။
kai says: Tada!…
မြစပဲရိုး says: ကြည့်ရတာ သူကြီးမင်း တင်လိုက်တဲ့ ပုံ ကို ရီဂျက်လုပ်ခံရသလားဘဲ။ lol:-)))
kai says: သမ္မတဦးထင်ကျော် ပြောကြားသော မိန့်ခွန်းမှာ အောက်ပါအတုိုင်းဖြစ်သည်။
ကျုပ်အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်းကို.. သမ္မတဦးထင်ကျော်က.. ၂ မိနစ် ၄၀ စက္ကန့်နဲ့ခြုံပြီး.. ပြောလိုက်သလိုပဲ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: “scenario” နှစ်ခု ကို မြင်ကြည့်နေမိပါတယ်။ တစ်ခု က တစ်သင်း က နိုင်သွားခဲ့ရင် အမုန်း အားကြီး တဲ့ အညိုးအာဃတာ တွေ နဲ့ ပိုပြီး ဖိနှိပ်သွားပြီး လူတစ်စု က လွဲလို့ တိုင်းပြည် အတွက် မျှော်လင့်ချက် လုံးဝ ကုန်သွား မဲ့ မြင်ကွင်း။
kai says: အရီးလတ်ကတော့ ဘယ်လိုမြင်နေသလဲမသိ…။
အဲဒီလိုလူတွေကို… မြင်နေတယ်.. မြင်နေတယ်..။ Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: I am so positive ThaGyeeMin. :-))))
လုံမလေးမွန်မွန် says: နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများခင်ဗျာ တဲ့. ကြွေပြီလေ….
မြစပဲရိုး says: ဆရာကြီး ဦးမော်သန်း စာရင်းစစ်ချုပ် ဖြစ်သွားပြီ တဲ့ဗျို့။ :-))
မြစပဲရိုး says: အစိုးရသစ် ကို ဝေဖန်ဖို့ အားခဲထားတဲ့ ကျွန်မ။
kai says: “ S ” ဆိုတာက small ကိုဆိုလိုတာ။ နေရာတကာအစိုးရသိပ်မပါစေချင်ဘူး။
မြစပဲရိုး says: တကယ်တော့ သမ္မတကြီး ဦးထင်ကျော်ဆိုတာ အဲဒီ ဆရာမကြီး ဒေါက်တာဒေါ်ခင်အုန်းသန့် တပည့် အရင်းကြီးဖြစ်ခဲ့မှာပါ။